Satechi Inotangisa Iyo Chete MacBook Dongles Yauchazoda
Kune vazhinji vashandisi veMacBook, dongles ingori chikamu chehupenyu. Kudzosa zviteshi zvekare uye zvekuwedzera sarudzo Apple kubva zvakasiiwa kumashure. Kana iwe uchitsvaga imwe dongle inoita zvishoma pane zvese, Satechi akakufukidza. Vhiki rino, Satechi akazivisa Pro Hub Max uye ane simba USB4 Multiport Adapter ine ramangwana-uchapupu maficha se8K HDMI.
Kuvaka pamusoro pekubudirira kwePro Hub Mini gore rapfuura, kuCES 2022, Satechi yakadonhedza maviri ega Mac dongles auchazoda. Muchokwadi, iyo Pro Hub Max yakavakirwa zvakananga Apple yazvino MacBook Pro, uye izvi ndizvo zvauchawana kubva kune ese ari maviri.
Iyo Satechi Pro Hub Max yakafanana neMini yakaziviswa muna Mbudzi wegore rapfuura, chete iri pachena kuti yakakura uye inoratidzira mamwe madoko evagadziri kana nyanzvi dzebhizinesi dziri kutsvaga kuita zvakawanda paMac yavo.
Iyo Pro Hub Max inovhara zvakakwana kudivi reMacBook Pro itsva, yobva yatora ese USB-C simba uye yoigovera kune akauraya madoko uye sarudzo dzevashandisi. Izvo zvinosanganisira USB-C ine 96W simba rekutumira, iyo inokwana kudzosera chero chero chinhu. Tisingatauri HDMI kunze kusvika ku4K pa60 Hz, USB-C, USB-A, gigabit ethernet yekubatanidza mawaya, combo SD/MicroSD kadhi muverengi, uye zvechokwadi, 3.5mm headphone jack.
Nekuda kwekupera kwayo kwealuminium yakatsetseka uye mbiri mbiri USB-C yekubatanidza, ichanyatso sangana neMac yako kune yakachena, iri nyore kushandisa setup. Iyo Pro Hub Max ichave iripo "munguva pfupi" ye $99 paSatechi webhusaiti.
Satechi USB4 Multiport Adapter ine 8K
Zvadaro, kune avo vari kutsvaga rakatowanda simba kana kuronga kumhanyisa akati wandei ekunze kuratidza uye zvishongedzo, Satechi yakatangawo USB4 Multiport Adapter ine 8K HDMI. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti Apple nyowani M1 Max MacBook inogona kuburitsa kune matatu ekunze kuratidzwa pa6K, saka izvi ndezvehunyanzvi ramangwana-uchapupu uye zvine zvakawanda zvekupa.
Satechi's USB4 adapta yakafanana neiyo dongle iri pamusoro asi inopa rakatowanda simba kune avo vanoshaya. Inosanganisira USB-C (USB4) inosvika 100w yekuchaja magetsi, HDMI ine tsigiro inosvika 8K pa30Hz, yakafanana combo SD/MicroSD kadhi muverengi, gigabit ethernet, 3.5mm headphone jack, tisingatauri maviri USB-A. ports (USB 3.2 pa10 Gbps) uye yenguva dzose USB-A port.
Kufanana nePro Hub Max, ingori nani zvishoma mukusarudza mamiriro, iyo USB4 Multiport Adapter ine 8K ichave iripo "munguva pfupi" $149 pawebhusaiti yaSatechi.
Nehurombo, kambani haina kugovera zuva chairo rekuburitsa, asi unogona kusaina pawebhusaiti yayo kuti uziviswe kana izvi zvave kuwanikwa.